अबको ५५ दिनमा ४० हजार कोरोना संक्रमित पुग्ने आंकलन, जोखिम झन् बढ्दो « Pahilo News
अबको ५५ दिनमा ४० हजार कोरोना संक्रमित पुग्ने आंकलन, जोखिम झन् बढ्दो
प्रकाशित मिति : 22 June, 2020 7:06 am
काठमाडौं, ८ असार । नेपालमा आगामी २ भदौसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ४० हजार पुग्ने आँकलन गरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हालको अवस्थालाई सूक्ष्म अनुसन्धान गर्दै सो आँकलन गरेको हो ।
संक्रमितको संख्या बढ्दै गए ४० हजारमध्ये २ हजार जना गम्भीर प्रकृतिका हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर स्वास्थ्य पूर्वाधारहरुको तयारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जुटेको छ ।
हाल देशभर १ हजार भेन्टिलेटर, १ हजार ८ सय आईसीयू बेड स्थापना गरिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. गुणराज लोहनीका अनुसार निजी अस्पताल, मेडिकल कलेजसँग बेड संख्या र लागत खर्चका बारेमा विवरण माग गरिएको छ । लागत खर्च सरकारले बेहोर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी छ ।
सरकारले आइसोलेसन सेन्टरहरुको व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । लक्षण नदेखिएका तर पोजेटिभ केस भएकालाई ती आइसोलेसन सेन्टरमा राखिने तयारी थालिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । आइसोलेसनमा चिकित्सकको टिम राख्ने मन्त्रालयको योजना छ ।
संक्रमितसँग सम्पर्कमा आएकाहरुको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि १ हजार ७५ वटा टिम परिचालन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । एउटा टिममा तीन जना रहने गरी ३ हजार २ सय २५ जना कर्मचारीहरु खटाइने सरकारको योजना रहेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालका अनुसार १ अर्ब ४ करोड खर्च भएको छ । १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा १ हजार ४ सय १४ जना डिस्चार्ज भए भने ८ हजार २ सय ४७ जनामा पोजेटिभ केस देखिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । जसमध्ये १६ करोड प्रदेशका अस्पताल र प्रयोगशाला स्तरोन्नतिका लागि पठाइएको थियो । जसअन्तर्गत ९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । केही रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव अर्यालले जानकारी दिए ।
हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ९ हजार २६ पुगेको छ । आइतबार थप ४ सय २१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या ९ हजार २६ पुगेको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमण निको भई १ सय ९४ जना डिस्चार्ज भएका छन् । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या १ हजार ७ सय ७२ जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
यस्तै, नेपालमा थप एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ । गुल्मीका एक संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्यारालाइसिस उपचारका लागि भारत गएका उनी भारतबाट जेठ २५ गते नेपाल फर्किएका थिए । राजधानी दैनिकबाट